Kuzotshalwa amasosha ezindaweni ezinobugebengu obudlulele: Mbalula | News24
Kuzotshalwa amasosha ezindaweni ezinobugebengu obudlulele: Mbalula
Cape Town - UNgqongqoshe wamaPhoyisa uFikile Mbalula, uthi kuzotshalwa amasosha ezindaweni ezinobugebengu obudlulele ezifundazweni ezahlukene, okubalwa kuzo iGauteng neWestern Cape ngaphambi kwamaholidi kaKhisimusi.
UMbalula ngaphambilini wayecele ukuba amasosha alekelele amaphoyisa ekulwisaneni nobugebengu.
UMengameli Jacob Zuma nguye umuntu ozobeka izwi lokugcina ngokutshalwa kwamasosha kulezi zindawo.
OLUNYE UDABA:Sekutshalwe amasosha ukubhekana nolwabokufika
UMbalula ulokhu egcizelela ekutheni ukutshalwa kwamasosha i-South African National Defence Force (SANDF) ezindaweni ezinobugebengu obudlulele emphakathini yethu yinto ezokwenzeka maduze.
"Siphezu kwalo lolu daba lokutshalwa kwamasosha emphakathini yethu ngemuva kwalokho uMengameli nguye ozobe esekugunyaza lokhu. Lokhu kuzokwenzaka ngaphambi kwamaholidi kaKhisimusi."
Uthi, ukutshalwa kwamasosha kuzokwenzeka ezindaweni lapho okunezinga eliphezulu lobugebengu, eWestern Cape, ezindaweni ezisenyakatho nePort Elizabeth nezingxenye zesifundazwe iGauteng neKwaZulu-Natal.